Archive du 20200129
Coronavirus Olona 10 tonga teny Ivato mampiahiahy ?
Nisy olona 10 tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato avy any Chine no fantatra fa arahi-maso akaiky raha ny loharanom-baovao iray omaly.
Governemanta vaovao 460 ireo te ho minisitra…
Teratany Malagasy miisa 7855 avy eto an-toerana, avy any Eoropa, Etazonia, Afrika, Canada no namaly ny antso nataon’ny fitondram-panjakana Malagasy tamin’ilay fitadiavana manam-pahaizana sy teknisianina hiasa eo anivon’ny rafim-panjakana maro samihafa,
Faritra Atsimo Andrefana Tezitra ireo niasa maina tamin’ny fifidianana
Araka ny fampitam-baovao azo avy any an-toerana dia ny ankamaroan’ireo niantoka ny fampandehanan-draharaha tamin’ireny fifidianana tamin’ny taona 2019 ireny tany Atsimo Andrefana Faritanin’i Toliara na ny fifidianana solombavambahoaka
Jean Eric Rakotoarisoa “Tokony hirosoana ny fifidianana governoram-paritra”
Nanatrika ny fanokafana ny atrikasa fanaovana tatitra ny fizotram-pifidianana izay no tanterahina ny taona 2017-2019 nataon`ny CENI sy ireo mpanohana ny fifidianana ny filohan`ny HCC,
HCC sy CENI Mahita fa tony sy milamina ny firenena
Ny zavatra lazaintsika voalohany dia milamina ny firenentsika, hoy ny filohan’ny vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana na CENI, Hery Rakotomanana,
Sahiran-tsaina Rajoelina Olana be ny fanilihana ireo lehiben’antoko…
Efa vita tamin’ny faramparan’ny herinandro teo ny fifantenana ireo olona handrafitra ny governemanta vaovao, raha ny tsiliam-baovao.
Fandalovan’ny orana tao Midongy Atsimo « Sady nahafaly no nampalahelo »
Voin-kava-mahatratra ny fahatongavan’ny andro ratsy naha tondra-drano teto amin’ny firenena ary miara-miombom-pihetseham-po amin’ireo niharam-boina teto amin’ny firenena
Roalahy voatifitry ny zandary Tena novonoina ny zanakay,hoy ny fianakaviana
Raharaha nafampana tao Toamasina ny fahafatesana tovolahy miisa 2 antsoina hoe Gaston Gauchy sy Jeannot Nomenjanahary 20 sy 22 taona ny 17 janoary hifoha 18 janoary teo.
Baolina kitra Malagasy Zava-dehibe ny fananana toe-tsaina mpandresy
2 andro, omaly talata 28 janoary sy anio 29 janoary 2020 no nanatanterahana ny fikaonandoham-pirenena “Conference Nationale sur le Football Malagasy”
Baolina kitra Ligue 1 eto Analamanga Eny Andralanitra anio ny tapany faha-2 amin’ny andro faha-12
Eny amin’ny kianja sentetika St Pierre enyAndralanitra indray anio alarobia 29 janoary no hanatanterahina ny tapany faharoa amin’ny andro faha-12 amin’ny
Rugby U 20 Barthés Trophy 2020 Ny Kenya Rugby Union no handray sy hikarakara azy
Tapaky ny CAR « Confédération Africaine de Rugby » na “Rugby Afrique” tany Le Cap atsy Afrika Atsimo, omaly alarobia 28 janoary fa homena ny Kenya Rugby Union tarihan’ny filohany,
Edito Tontolo samy hafa
Milamina ny firenentsika, hoy ny filohan’ny CENI omaly. Zava-dehibe ny nahafahantsika nametraka tontolo tony, hoy kosa ny filohan’ny HCC.
Fadintseranana sy ny toekarena Mifampiankina tanteraka
Nankalazaina omaly tetsy amin'ny Hotely Carlton anosy ny faha-200 taonan'ny fadintseranana sy ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho azy ireo.
Vahoaka Malagasy Mahantra, tsy voakarakara ny maha olona
Adihevitra tsy mety vita eo amin’ireo mpanohana sy ny mpanohitra ny fitondrana ny hoe :
Fitaterana ana habakabaka Mety haato ny zotram-piaramadina avy any Azia
Tsy mipetra-potsiny ny fitondram-panjakana ankehitriny manoloana ny fihanak’ilay Coronavirus, otrik’aretina mamely ny taovam-pisefoana.
Ambatolampy Nidina an-dalambe ny mpivarotra, mpitatitra, mpandraharaha
Manao ranolava ny fidinana an-dalambe eto amintsika. Nitokona nilanja sorabaventy avokoa ihany koa omaly ireo mpandraharaha sy mpitatitra ao Ambatolampy, Faritra Vakinankaratra.
Vary makalioka avy any Ambatondrazaka Herinandro sisa ny tahiry misy eny an-tsena
Mbola tapaka tanteraka hatreto ny lalana any amin’ny lalam-pirenena faha-44 vokatry ny tondra-drano be tany an-toerana nateraky ny andro ratsy teto amintsika.
Herisetra mifototra amin’ny mahalahy sy mahavavy 317 isa ireo fitarainana voarain’ny PMM tamin’ny 2019
Tena mahazo vahana ny herisetra eto amintsika. Tsy hanavahana intsony na vavy na lahy na olon-dehibe na ankizy ireo hiharany fa saika lasibatra avokoa ny sokajin-taona rehetra.
Fampiroboroboana ny sehatra fizahantany Hampiasaina ny application “the real Madagascar “
« Efa tafiditra tanteraka ao anatin’ny paik’ady hampitomboana ny tahan’ny mpizahatany hitsidika an’i Madagasikara isika izao », hoy ny nambaran’ny minisitry ny fizahantany, Joel Randriamandrato.
POLISY MPANOLANA Tsy mitombina hatreto ilay vaovao nivoaka tamin’ny facebook
Araka ny fampitam-baovaon’ny mpiandraikitra eo anivon’ny polisim-pirenena, tsy mitombina sady tsy azo raisina hatreto ilay vaovao niely fa polisy no mpanolana ilay vehivavy teo Ambondrona.
Trosa 190.000 ar lasa 20 tapitrisa ar Hiakatra fitsarana amin’ny alatsinainy ny raharaha
Araka ny fampitam-baovaon’ny fianakavian’ny lasibatra, raha nananan’ny teratany Sinoa izay mpivarotra eo Behoririka vola 190.000 ariary ny raim-pianakaviana iray dia nakarin’ilay Sinoa
FIDANGAN'NY VIDIM-PIAINANA Mitokona ihany koa ny mpivarotr'anana ao Ambatolampy
Sambany teo amin'ny tantara no nisy mpivarotr'anana nitokona.